.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: cartoon animations (gif)
cartoon animations (gif)
ဒီနေ့ ပျင်းပျင်းနဲ့ google မှာ ပုံလေးတွေရှာရင်း ဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်တွေ့တာနဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပါညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ချစ်စရာ animation ပုံလေးတွေရနိူင်တဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ။
အဲပုံလေးတွေက flashsong ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာထည့်သုံးလို့ရသလိုတခြားသုံးချင်တဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ ဟီး
လိုချင်ရင် အောက်က လိပ်စာလေးက သွားလိုက်ပါနော်။
Posted by FlashSongCrazy at 02:23